Izici nobukhulu besiphepho uMaría | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngemuva kwezinhlekelele ezidalwe yisiphepho u-Irma, lokhu akukapheli. Iziqhingi zaseCaribbean zilinyazwe kabi yi-Irma ekuqaleni kukaSepthemba. Kodwa-ke, kufanele ulungiselele ukufika kwesinye isiphepho esisha: uMaria.
ISiphepho uMaría siqale njengesiphepho esishisayo, kodwa ngaleli Sonto sibe yisiphepho, sibhalisa imimoya efinyelela kumakhilomitha ayi-120 ngehora. Kuthiwani ngalesi siphepho esisha?
1 ISiphepho uMaria
2 Izincomo zesiphepho
Lesi siphepho siseSigaba 1 futhi singamakhilomitha angama-200 enyakatho-ntshonalanga yeBarbados. Njengoba ihamba, izofinyelela eziqhingini zaseLeeward kulobubusuku nangaphezulu enyakatho-mpumalanga yoLwandle iCaribbean kusasa.
Lesi siphepho sizokwazi ukukhiqiza amagagasi amakhulu futhi abhubhisayo ngenxa yokuvunguza komoya. Lokhu kungadala ulwandle lukhuphuka phakathi kwamamitha ayi-1,2 no-1,8 lapho ngidlula eziQhingini zaseLeeward. Ngaphezu kwalokho, ibike imvula enkulu engaba ngamasentimitha angama-51 kulezo ziqhingi, ePuerto Rico naseziQhingini zaseBritish nase-US ngoLwesithathu ebusuku. Lokhu kungadala izikhukhula kanye nokudilika komhlaba okusongela impilo.
Iwashi lesiphepho lifaka futhi isiqhingi saseMartinique, i-Antigua neBarbuda, iSaba ne-Saint Eustatius ne-Saint Lucia. Ngenkathi isiqhingi saseFrance iGuadeloupe sizoba sesimweni esibomvu mayelana neziphepho kusukela emini ngalo msombuluko.
Into enhle kulezi zimo akukhona ukuhamba, kepha ukufuna indawo yokuhlala ezindlini noma ezindaweni eziphephile. Unethemba lokuthi iSiphepho uMaria singafinyelela esigabeni sesi-3 lapho sidlula eGuadalupe. Amagagasi angaba ngamamitha ayi-10 ukuphakama futhi afike ku-180km / h nemvula engama-400-millimeter.
Isiphepho sesibili, uJosé, naso siyasebenza e-Atlantic futhi sibangele izixwayiso zesiphepho esishisayo enyakatho-mpumalanga ye-United States.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Izici nobukhulu besiphepho uMaría
Sengathi unkulunkulu angabeka isandla sakhe